Ku saabsan qoraalkii ugu dambeeyay ee la daabacay | Laga soo bilaabo Linux
Marka ugu horeysa waa inaan kuu sheegaa inaan xanaaqsanahay oo laga yaabo inaan hadhow ka qoomamo tan. Aad u xanaaq badan, badanaa sababta oo ah faallooyinka qaar ka mid ah isticmaaleyaashu ay ku dhejiyeen maqaalka ku saabsan xogta uu aruurinayo Mareykanka.
Tani maahan Taringa ama wax lamid ah dad badana way garanayaan, waana wax laga xumaado, maxaa yeelay qofka ogolaaday wuxuu yiri maqaalka xitaa si buuxda uma uusan u aqrin si buuxda si uu u arko bilowga boostada oo si cad u sheegay inay ahayd in dib loo eego. Si kastaba ha noqotee, qoraalada WordPress ayaa ii sheegi doona cidda ay ahayd.
Waa sababtaa tan hadda dhammaan adeegsadayaasha mas'uulka ka ah tifaftirayaasha, ama oggolaansho ay ku ansixiyaan maqaallada la sugayo laga saari doono shaqooyinkooda illaa ay ka caddaato cidda ahayd qoraaga aqooneed ee dhacdada.
Faallooyinka ku saabsan in maqaalka uu ahaa xatooyo, haddii uu koobiyeeyo mareegta Perseus iyo kuwa kaleba, way badbaadin lahaayeen, maxaa yeelay uma baahnin inaan wax sidan oo kale ah ku qabanno Laga soo bilaabo Linux, adna waad ogtahay.
Sida iska cad, isticmaalaha wax qoray ama soo guuriyey maqaalka (malaha ujeedooyinka ugu fiican) ma garanayo siyaasadahayaga ku saabsan Nuqulka / Dajinta, aad ayuu uga yar yahay asalka asalka. In ka badan hal munaasabad ayaa mawduuca laga wada hadlay, waxaan sidoo kale leenahay a hagista iskaashatada halkaasoo waxaas oo dhan si cad loogu sharraxay.
Haddii uu jiro qof ka xumaaday dheecaankan oo dhan, raali iga ahaada, laakiin aniga waxay ila tahay inaan dibiga geesaha laabaneyno waana waxa aan sameyn doono hadda. DESDELINUX WELIGABA MA TARINGA YAHAY, ama goob kale oo la mid ah.
Shaki kasta, soo-jeedin, sheegasho ama waxa ay rabaan inay ka faalloodaan, way sameeyaan ee ku jira madasha fadli.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Laga soo bilaabo Linux » Ku saabsan maqaalkii ugu dambeeyay ee la daabacay